महिलालाई एसिड हान्दा सारा देश बोल्छ, तर मलाई एसिड हाँन्दा कसैले केही बोलेन (हेर्नुहोस भिडियो) – Sanjal Nepal
Homeसमाचारमहिलालाई एसिड हान्दा सारा देश बोल्छ, तर मलाई एसिड हाँन्दा कसैले केही बोलेन (हेर्नुहोस भिडियो)
महिलालाई एसिड हान्दा सारा देश बोल्छ, तर मलाई एसिड हाँन्दा कसैले केही बोलेन (हेर्नुहोस भिडियो)
February 14, 2021 admin समाचार 1798
ए’सिड आक्र’मणबाट पि’ढित महिलालाई सरकार लगायतले उपचारमा सहयोग गरेका हुन्छन् तर मलाई सरकार त के मिडियाले वास्ता गरेनन् भनेर चि’त्त दु’खाउदै थिए भिडियो हेर्नुहोस !
December 25, 2020 admin समाचार 1318
काठमाडौ, जेठ १३ – हाम्राो समाजमा जातीय विभेद र छुवाछुत हुदै आएको छ । कतिपय ठाँउमा जातीय विभेदका कारण मानिसको ज्यान समेत गएको कयौ घटनाहरु घटदै आएका छन् । त्यस्तै भारतमा एउटा घटना घटेका छ
November 12, 2020 admin समाचार 3702
भिडियो समाचारको अन्तिममा राखिएको छ !पोखरा । नवबिबाहित अभिनेत्री आँचल शर्माका लागि अत्यन्तै दुखद खबर आएको छ । उनले भर्खरै मात्र डा. उदिप श्रेष्ठसँग धुमधामका साथ बिबाह गरेकी थिइन् । त्यो निक्कै गसिप बनेको थियो
November 22, 2020 admin समाचार 2049
एजेन्सी। भारत गुजरात स्थित भावनगरमा एक बालिका घरमा खेल्दै थिइन्। घरमा भएको प्रेसर कुकरसँग खेल्दा-खेल्दै यस्तो भयो की उनले आफ्नो टाउको कुकरमा घुसाइन। घरमा उनका परिवारजनले बालिकाको टाउको कुकरबाट निकाल्न अनेक प्रयास गरे। उनीहरु लगाएका